musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Kutanga Munyika: 100% Battery Powered Container Ship
Yara Birkeland, ngarava yekutanga kuzvitonga uye yemagetsi yakazara pasi rose, ichakurumidza kutanga kushambadzira ichiri kutanga makore maviri ekuyedza nguva, isati yapinda zvizere kuzvitonga munzira ichibva kumahombekombe eNorway. Inoshandiswa zvizere neLeclanché high-energy lithium-ion bhatiri system.
Iyo isina emission-yemahara uye yakachengeteka simba rekupa inopihwa ne6.7 MWh bhatiri system ine yakasanganiswa yekutonhodza mvura kuti ive nechokwadi chekushanda kwekushisa. Iyo Leclanché Marine Rack System (MRS) inova nechokwadi chekudzora tembiricha yemaseru uye kushanda kwavo kwakavimbika zvachose pamusoro pehupenyu hwesevhisi angangoita makore gumi. Mukuwedzera, iyo MRS inopa nyika-ye-iyo-inodzivirirwa kubva pakupisa uye yakasanganiswa yekudzivirira moto system yakanyatso kugadzirirwa uye yakasimbiswa yezvido zvemugungwa.
Yara Birkeland yakapedza rwendo rwayo rwekutanga kuenda kuOslo pakati paMbudzi ndokuzoenda nechikepe kuPorsgrunn, iyo yekumaodzanyemba kweNorway nzvimbo yekugadzira yeYara International, mugadziri wefetereza uye muridzi wengarava.
Leclanché yakapa 6.7 MWh bhatiri system (iyo inomiririra simba rakafanana ne130 Tesla Model 3 mabhatiri) yekugovera simba reanosvika 80 metres kureba uye 15 metres yakafara ngarava midziyo ine deadweight 3,120 tonnes kana 120 standard midziyo (TEU). Ichi chine magetsi "mudziyo wegirini" uchashanda nekumhanya kwesevhisi kweanosvika 6 knots, nekumhanya kwepamusoro kwegumi nematatu.
Lithium-ion bhatiri system - yakagadzirwa muEurope
Iyo bhatiri sisitimu yeYara Birkeland, inogadzirwa muSwitzerland, yakarongedzerwa nemasero e-lithium-ion ayo anogadzirwa panzvimbo yeLeclanché otomatiki yekugadzira muWillstätt, Germany uye mabhatiri module akagadzirwa muSwitzerland. Iyo yakakwirira simba density masero akasanganiswa nehupenyu hurefu hwehupenyu hwe8,000 @ 80% DoD, ine tembiricha yekushanda kubva -20 kusvika +55 ° C, iri pakati pebhatiri system. Iyi Leclanché Marine Rack System ine tambo makumi maviri ine 20 modules ye 51 masero ega ega, kwesero 32 masero. Iyo bhatiri sisitimu ine yakavakirwa-mukati redundancy, ine masere akaparadzana makamuri ebhatiri: kana akawanda tambo akadururwa kana kumira kushanda, mudziyo unogona kuenderera mberi nemabasa ayo.
Kana zvasvika kune mabhatiri masisitimu ezvishandiso zvemugungwa, kuchengetedzwa kwakanaka kubva pakupisa kwakanyanya kunokosha. Kudzivirira moto pagungwa rakashama, Leclanché akanyatso gadzira modular DNV-GL yakasimbiswa MRS. Imwe neimwe tambo yebhatiri ine gasi uye chiutsi madetectors, redundant thermal monitoring uye inotonhorera sisitimu yekudzivirira kupisa uye kupisa zviitiko. Kana chiitiko chekushisa chikaitika pasinei nezvose izvi, Fifi4Marine yekudzima moto inopinza mukati: inobva pamhepo ine ushamwari hwemhepo, inotonhora uye inodzima nekukurumidza uye zvinobudirira.
Zero emissions nekuda kwebhatiri drive
Kana nguva yekuyedza yapera, iyo Yara Birkeland ichafamba yakazvimiririra yakatakura zvigadzirwa zvemidziyo kubva kuYara International kugadzira chirimwa muHerøya kuenda kuchiteshi cheBrevik. Yara International iri kutevera zero-emission strategy ine ese-electric drive solution: mashandiro echikepe achabvisa nzendo dzinosvika zviuru makumi mana pagore uye zvinosanganisirwa NOx uye CO40,000 emissions. Inoderedzawo ruzha uye kusvibiswa kwemhepo paunenge uri pachiteshi. Mabhatiri anochajwa otomatiki nemagetsi anobva kune anogona kuvandudzwa.
Sustainability ibhizinesi rakakosha uye rakakomba uye kuzvipira kwetsika kweLeclanché. Zvese zvigadzirwa zveKambani uye nzira dzayo dzekugadzira dzakasimba dzinoibvumira kuita mupiro wakakosha kune e-mobility indasitiri uye shanduko yesimba repasi rose kune inoenderera. Leclanché ndomumwe wevashoma veEuropean bhatiri system suppliers ine yayo yega masero ekugadzira maseru uye yakazara-kuziva nzira yekugadzira emhando yepamusoro lithium-ion maseru - kubva ku electrochemistry kuenda kune bhatiri manejimendi software uye hurongwa hwemabhatiri masisitimu. Iwo masisitimu anoshandiswa mune yakamira simba rekuchengetedza masisitimu, zvitima, mabhazi uye ngarava, pakati pezvimwe. Iyo e-Marine chikamu parizvino Leclanché inokurumidza kukurumidza bhizinesi chikamu. Iyo kambani yakatoendesa mabhatiri masisitimu ezvikepe zvakawanda zvine magetsi kana mahybrid propulsion masisitimu ane maodha ezvimwe zvakawanda. Pakati pemapurojekiti akapedzwa zvakabudirira pane "Ellen," chikepe chevatyairi nemotokari icho chave kushanda muDanish Baltic Sea kubva 2019 uye ndicho chikepe chakareba, chemagetsi ese mukushanda kwemazuva ese.